Ahoana ny fomba hanampian'ny fanapahan-kevitry ny orinasa ny sanda amin'ny fizotran'ny varotrao | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 24, 2022 Alatsinainy Janoary 24, 2022 Zara Ziad
Betsaka ny mpivarotra B2B - efa ho 27% - manaiky izany ny angona tsy ampy dia nandany 10%, na amin'ny toe-javatra sasany, mihoatra noho izany aza amin'ny fatiantoka isan-taona.
Ity dia manasongadina mazava ny olana lehibe atrehin'ny ankamaroan'ny mpivarotra ankehitriny, ary izany dia: ny kalitaon'ny angona ratsy. Ny angon-drakitra tsy feno, tsy ampy, na ratsy kalitao dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny fizotran'ny varotrao. Mitranga izany satria saika ny fizotran'ny departemanta rehetra ao amin'ny orinasa iray - fa indrindra ny varotra sy ny varotra - dia entin'ny angon-drakitra momba ny fandaminana.
Na fomba fijery 360 feno momba ny mpanjifanao, fitarihana, na vinavinao, na fampahalalana hafa mifandraika amin'ny vokatra, tolotra serivisy, na adiresin'ny toerana - ny marketing no ivondronan'izy rehetra. Izany no mahatonga ny mpivarotra hijaly indrindra rehefa tsy mampiasa rafi-pitantanana ny kalitaon'ny angon-drakitra ny orinasa iray ho an'ny fanohizana ny mombamomba ny angona sy ny fanamboarana ny kalitaon'ny angona.
Ato amin'ity bilaogy ity, te-hisarika ny saina amin'ny olana momba ny kalitaon'ny angona mahazatra indrindra aho sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fizotran'ny varotrao; hojerentsika avy eo ny vahaolana mety ho an'ity olana ity, ary farany, ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mametraka izany tsy tapaka.
Olana lehibe indrindra momba ny kalitaon'ny angona atrehin'ny mpivarotra
Na izany aza, ny kalitaon'ny angon-drakitra mahantra dia miteraka lisitra lava be ho an'ny mpivarotra ao amin'ny orinasa iray, saingy rehefa nanolotra vahaolana momba ny angona ho an'ny mpanjifa 100+, ny olana momba ny kalitaon'ny angona mahazatra indrindra hitanay ny olona dia:
Mahazo fijery tokana momba ny fananana angona fototra.
Mipoitra ity olana ity rehefa voatahiry ho an'ny orinasa iray ihany ny rakitra dika mitovy. Eto, ny teny hoe entity dia mety hidika na inona na inona. Amin'ny ankapobeny, eo amin'ny sehatry ny varotra, ny teny hoe entity dia mety manondro: mpanjifa, fitarihana, fanantenana, vokatra, toerana, na zavatra hafa izay fototry ny fanatanterahana ny hetsika ara-barotra ataonao.
Ny fiantraikan'ny firaketana dika mitovy amin'ny fizotran'ny varotrao
Mety ho nofy ratsy ho an'ny mpivarotra rehetra ny fisian'ny firaketana dika mitovy amin'ny angon-drakitra ampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra. Rehefa manana firaketana dika mitovy ianao, dia ireto misy toe-javatra matotra mety hitranga:
Fotoana sy tetibola ary ezaka very maina - Koa satria misy firaketana maromaro ho an'ny orinasa iray ihany ny angonao, dia mety handany fotoana, teti-bola ary ezaka imbetsaka ianao ho an'ny mpanjifa iray, ny hoavy, na ny fitarihana.
Tsy afaka manamora ny traikefa manokana – Ny firaketana dika mitovy matetika dia misy ampahany samihafa amin'ny fampahalalana momba ny orinasa iray. Raha nanao fanentanana ara-barotra tamin'ny fampiasana fomba fijery tsy feno momba ny mpanjifanao ianao, dia mety hahatonga ny mpanjifanao hahatsapa ho tsy heno na tsy takatry ny sainao.
Tatitra momba ny varotra tsy marina - Miaraka amin'ny firaketana angon-drakitra dika mitovy, dia mety hiafara amin'ny fanomezana fijery tsy marina momba ny ezaka ara-barotra ataonao sy ny fiverenany ianao. Ohatra, nandefa mailaka fitarihana 100 ianao, saingy nahazo valiny avy amin'ny 10 ihany - mety ho ny 80 amin'ireo 100 ireo ihany no tsy manam-paharoa, ary ny ambiny amin'ny 20 dia dika mitovy.
Nihena ny fahombiazan'ny fampandehanana sy ny fahombiazan'ny mpiasa - Rehefa maka angon-drakitra ho an'ny orinasa iray ny mpikambana ao amin'ny ekipa ary mahita firaketana maromaro voatahiry amin'ny loharano samihafa na voaangona amin'ny fotoana iray amin'ny loharano iray ihany, dia toy ny sakana goavana eo amin'ny famokarana mpiasa izany. Raha mitranga matetika izany, dia misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny orinasa iray manontolo izany.
Tsy afaka manao attribution fiovam-po marina - Raha toa ianao ka nanoratra mpitsidika mitovy amin'ny orinasa vaovao isaky ny mitsidika ireo fantsona sosialy na tranokalanao, dia ho lasa saika tsy ho vitanao ny hanatanteraka ny fanondroana fiovam-po marina, ary mahafantatra ny lalana marina narahin'ny mpitsidika mankany amin'ny fiovam-po.
Mailaka ara-batana sy elektronika tsy voatana - Ity no vokatra mahazatra indrindra amin'ny firaketana dika mitovy. Araka ny voalaza teo aloha, ny firaketana dika mitovy dia matetika ahitana fijery ampahany amin'ilay sampan-draharaha (izany no nahatonga ny firaketana ho dika mitovy amin'ny angon-drakitrao tamin'ny voalohany). Noho izany antony izany, ny firaketana sasany dia mety misy toerana tsy hita, na fampahalalana momba ny fifandraisana, izay mety hahatonga ny mailaka tsy handefasana.
Inona no atao hoe Entity Resolution?
Fanapahan-kevitra (ER) dia ny dingan'ny famaritana hoe rahoviana ny references amin'ireo sampan-draharahan'izao tontolo izao dia mitovy (antoko mitovy) na tsy mitovy (antoko samihafa). Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia ny fizotry ny famantarana sy fampifandraisana ireo rakitsoratra marobe amin'ny sampana iray ihany rehefa voafaritra amin'ny fomba hafa ny rakitra ary ny mifamadika amin'izany.
Fanapahan-kevitra sy kalitaon'ny fampahalalam-baovao nataon'i John R. Talburt
Mampihatra ny fanapahan-kevitry ny orinasa amin'ny angona momba ny varotrao
Rehefa nahita ny fiantraikan'ny dika mitovy amin'ny fahombiazan'ny hetsika ara-barotra ataonao, dia ilaina ny manana fomba tsotra nefa mahery vaika. deduplicate ny angon-drakitrao. Eto no misy ny fizotran'ny famahana ny enti-manana miditra. Raha tsorina, ny famahana ny enti-manana dia manondro ny dingana hamantarana izay firaketana an'ny orinasa iray ihany.
Miankina amin'ny fahasarotana sy ny toetry ny kalitaon'ny angon-drakitrao, ity dingana ity dia mety ahitana dingana maromaro. Hitondra anao amin'ny dingana tsirairay amin'ity dingana ity aho mba hahafantaranao ny tena idiran'izany.
Fanamarihana: Hampiasa ny teny hoe 'entité' aho rehefa mamaritra ny dingana etsy ambany. Saingy ny dingana mitovy dia azo ampiharina ary azo atao ho an'ny orinasa rehetra tafiditra amin'ny fizotran'ny varotrao, toy ny mpanjifa, mpitarika, prospect, adiresy toerana, sns.
Dingana amin'ny fizotry ny famahana ny Entity
Manangona firaketana angon-drakitra momba ny sampan-draharaha monina amin'ny loharano angon-drakitra samihafa - Ity no dingana voalohany sy manan-danja indrindra amin'ny dingana, izay hahafantaranao izay tena voatahiry ny firaketana an-tsoratra. Mety ho angon-drakitra avy amin'ny doka amin'ny media sosialy, fifamoivoizana amin'ny tranokala, na soratana amin'ny tanana ataon'ny mpivarotra na mpiasan'ny varotra. Rehefa fantatra ny loharanom-baovao dia tsy maintsy atambatra amin'ny toerana iray ny rakitra rehetra.
Famoronana rakitsoratra mitambatra – Raha vao tafatambatra ao anaty angon-drakitra iray ny firaketana, fotoana izao hahafantarana ny angon-drakitra sy hamoahana ny antsipiriany miafina momba ny rafitra sy ny atiny. Manadihady ara-statistika ny angon-drakitrao ny mombamomba ny angona ary mahita raha tsy feno, banga, na manaraka ny lamina sy ny endrika tsy mety ny sandan'ny angona. Ny fanaovana mombamomba ny angonao dia mampiseho antsipiriany hafa toy izany, ary manasongadina ny fahafahana manadio ny angona.
Manadio sy manara-penitra ny tahirin-kevitra - Ny mombamomba ny angon-drakitra lalina dia manome anao lisitry ny entana azo atao hanadiovana sy hanara-penitra ny angonao. Mety tafiditra ao anatin'izany ny dingana hamenoana ny angona tsy hita, ny fanitsiana ny karazana angona, ny fanamboarana ny lamina sy ny endrika, ary koa ny fanaparitahana saha be pitsiny ho zana-singa mba hahazoana famakafakana angona tsara kokoa.
Mampifanaraka sy mampifandray ireo firaketana an'ny fikambanana iray ihany – Ankehitriny, vonona ny hampitoviana sy hampifandray ny rakitsoratry ny angonao, ary hamarana izay firaketana an'ny fikambanana iray ihany. Ity dingana ity dia matetika atao amin'ny alàlan'ny fampiharana ny algorithm mifanandrify amin'ny sokajy indostrialy na fananan-tany izay na manatanteraka fifanandrinana marina amin'ny toetra mampiavaka manokana, na lalao tsy mazava amin'ny fitambaran'ny toetran'ny orinasa iray. Raha toa ka tsy marina ny valiny avy amin'ny algorithm mifanandrify na misy valiny diso, dia mety mila manitsy tsara ny algorithm ianao na manamarika ny lalao diso ho dika mitovy na tsy duplicate.
Fampiharana ny fitsipiky ny fampivondronana ireo sampana ho rakitra volamena - Eto no mitranga ny fampiraisana farany. Mety tsy te-very angona momba ny sampan-draharaha iray voatahiry manerana ny firaketana ianao, ka ity dingana ity dia momba ny fanefena ny fitsipika hanapa-kevitra:
Inona no rakitra master ary aiza ny dika mitovy aminy?
Inona avy ireo toetra avy amin'ny dika mitovy tianao hadika amin'ny rakitra master?
Raha vantany vao voarindra sy nampiharina ireo fitsipika ireo, ny vokatra dia fitambarana firaketana volamena an'ny orinasanao.
Manangana rafitra famahana ny orinasa tsy tapaka
Na dia nandalo torolalana tsotra miandalana aza izahay amin'ny famahana ireo sampan-draharaha ao anaty angon-drakitra ara-barotra, dia zava-dehibe ny mahatakatra fa tokony horaisina ho toy ny dingana mitohy ao amin'ny fikambananao izany. Ny orinasa izay mampiasa vola amin'ny fahatakarana ny angon-dry zareo sy ny famahana ny olana fototra momba ny kalitao dia napetraka ho amin'ny fitomboana mampanantena kokoa.
Mba hampiharana haingana sy mora kokoa ny dingana toy izany dia azonao atao koa ny manome rindrankajy famahana enti-manana mora ampiasaina amin'ny mpandraharaha angon-drakitra na mpivarotra amin'ny orinasanao, izay afaka mitarika azy ireo amin'ny dingana voalaza etsy ambony.
Amin'ny farany, azontsika atao ny milaza fa ny angon-drakitra tsy misy dika mitovy dia miasa ho toy ny mpilalao manan-danja amin'ny fampitomboana ny ROI amin'ny hetsika ara-barotra sy ny fanamafisana ny lazan'ny marika manerana ny fantsom-barotra rehetra.
Tags: fanondroana fiovam-pomarina dataangona kalitaodeduplificationfikambanana samihafafiraketana dika mitovyny mitovy aminyfikambananafamahana ny enti-mananaerangona ara-barotratatitra momba ny varotrasampana mitovyinona ny